Trump Iyo Kooxdiisa Oo Weli Ku Doodaya In Aan Laga Guulaysan Doorashadii Oo Aannay Aqoonsanayn Biden - #1Araweelo News Network
Trump Iyo Kooxdiisa Oo Weli Ku Doodaya In Aan Laga Guulaysan Doorashadii Oo Aannay Aqoonsanayn Biden
Baaqyada Trump Lagaga Dalbanayo Inuu Aqbalo Doorashada Oo Sii Kordhay Iyo Jawaabta Uu Ka Bixiyay
Washington(ANN)-Madaxweyne Trumo, ayaa weli ku adkaysanaya in aan lagaga guulaysan doorashadii 3 November ee lagaga adkaaday, taas oo natiijadeeda ay guushu ku raacday Murrashaxa la tartamayay ee dumuqraadiga Joe Biden iyo haweenayda Kamala Harris ee Madaxweyne ku xigeenka u ah.
Trump iyo kooxdiisa, ayaa ku andacoonayay in gobollada muhiimka ah ee lagaga adkaaday loo tiriyo dib, iyadoo ku doodaya in khladaad iyo ku shubasho laga sameeyay, balse tirinta lagu sameeyay dhawr gobol oo ka mid ah kuwa loo yaqaan Supper State eel eh ergooyinka muhiimka ah, ayaa la waayay waxyaabo caddaynaya oo markhaati u ah dooda Trump iyo kooxdiisa.
Diidamada Trump uu ku diiiday inuu aqbalo natiijada doorashada ayaa si weyn u abuurtay walaac iyo wer-wer, iyadoo laga cabsi qabo in xaaladda kala qaybsanaantu sii siyaado, isla markaana wuxuu Trump dhegaha ka furaystay dhawaaqyo ay saaxiibadii xisbiga Jamhuuriga qaarkood, sida Madaxweynihii hore George W Bush ay kaga dalbanayaan inuu aqbalo natiijada doorashada.
Kooxda xil wareejinta ayaa qaarkood diideen in ay bilaabaan hawsha xil wareejinta ee mudada kala guurka, waxaana saraakisa maamulka Trump gebi ahaanba diideen inay saxeexaan warqad u ogolaaneysa madaxweynaha la doortay ee kooxda kala wareejinta si Joe Biden iyo kooxdiisu si rasmi ah u bilaabaan shaqadooda toddobaadkan, waxayna ku doodeen in madaxweynaha xilka haya aannu aqoonsanayn guusha Biden.
Maamulaha Maamulka Adeegyada Guud, oo ah wakaaladda hoose ee mas’uulka ka ah dhismayaasha federaalka, ayaa leh door yar oo la yaqaan marka madaxweynaha cusub la doorto: in la saxeexo waraaqaha si rasmi ah loogu wareejinayo malaayiin doollar, iyo sidoo kale in ay fursad u siiso saraakiisha dowladda. , Booska xafiiska ee wakaaladaha iyo qalabka loo oggol yahay kooxaha kala-guurka ee cashuur-bixiyuhu maalgeliyo ee guuleystaha.
Af hayeen u hadlay GSA, Pamela Pennington, oo ah afhayeenka GSA, ayaa tidhi, “Maamulkayagu wuxuu sii wadi doonaa inuu u hogaansamo, oo uu buuxiyo dhamaan shuruudaha sharciga.”
Diidmada in la soo saaro qirasho rasmi ah ee guusha Biden, ayaa maamulka cusub ee Biden iyo Harris ka carqaladaynay oggaanshaha iyo la socodka ilaha lagama maarmaanka ah si loo hubiyo in kala-guurka uu yahay mid habsami leh intii suurtagal ah sida uu qabo sharciga ku-meelgaadhka Madaxweynaha. Kheyraadka sida helitaanka mas’uuliyiinta sare ee dowladda, xafiiska dowladda iyo qalabka, cinwaannada emilada ee dowladda, fasaxyada amniga ee hordhaca ah, maalgelinta la xidhiidhka xilliga kala guurka iyo waxyaabo kale.
Qoraal kasoo baxay kooxda GSA, ayaa lagu sheegay in federaalka la yaabban yihiin goorta Aqalka Cad uu filayo in gacan ka saarista ka socota hal maamul illaa tan xigta ay bilaabanto – marka madaxweynuhu uu dhammeeyo waddooyinka sharciga ah ee uu kula dagaallamayo natiijooyinka, ama codka rasmiga ah ee kulliyadda doorashada Dec. 14? Waxaa jira 74 maalmood, laga bilaabo Axadda, illaa caleema saarka Biden Janaayo 20.
Ma jiro madax hay’ad ah oo ka hor bixi doonta madaxweynaha hortiisa arrimaha ku saabsan xilliga kala guurka. Sarkaalka ayaa saadaaliyay in madaxda hay’addaha loo sheegi doono in aannay la hadlin kooxda Biden.
Dhinaca kale, baaqyo lagaga dalbanayo Trump inuu aqbalo natiijada doorashada ayaa sii kordhaya, balse Trump, ayaa mar kale ku celiyay maanta in aannu aqoonsanayn natiijada doorashada iyo guusha Biden oo uu ku tilmaamay mid aan sharci ahayn.